“Misy fandrika politika betsaka ny lalana izoran’ny FFKM” - Lakroan'i Madagasikara on line - Les actualités sociales et religieuses à Madagascar
Nanangona Ranaivo il y a 4 années
- Misy voambolana am-bavan’ny maro, iniana tazonina amin’ny teny frantsay: “justice”, “vérité” sy “réconciliation”, rahefa miresaka ny fampihavanam-pirenena. Adikan’ny olona vilana ireo, azonao hazavaina ve?
“Justice” aloha: raha lalàna no dikany, tokony hiditra fitsarana daholo farafaharatsiny ireo filoham-pirenena teo aloha hanaovana fampihavanam-pirenena. Iza, ohatra, no nanome lalana an’Atoa Didier Ratsiraka hahazo famelan-keloka kanefa nisy ny raharahan’ny kung-fu tamin’ny 1 aogositra 1985. Izy milaza fa tsy teto an-toerana kanefa nodiovin’ny fitsarana. Dia ahoana ny zon’olombelona tamin’ireo ankizy tonga dia nosamborina fotsiny tany an-tranony, nogadraina tany Arivonimamo? Teo koa ny raharahan’ny 1991, ny 2002 sy ny 2009, iza no tokony hotsaraina raha lalàna no resahina? Dia inona no itarafana ilay “justice”, ilay fahamarinana? Ka raha lalàna, tsy misy afa-bela eo. Iza no nitarika nankeny Iavoloha na tetsy Ambohitsorohitra satria samy nisy mpiandry lapa nanao ny adidiny tamin’ireo. Dia inona no heverina ho fahamarinana amin’izao fotoana izao, hanaovana an’ilay 4F?
Faharoa, ny teny hoe “vérité”: inona no heverina amin’izany? Mitovy eto ny “justice” sy “vérité”, fahamarinana izany. Mahatanty ny fanehoana ny zavatra fonosin’izany ve ny rehetra, indrindra ny mpanao politika? Tsy maintsy hifampiaro ireo satria samy voakasika. Jereo fa na ny raharaha Ratsimandrava aza tsy misy sahy miteny. Nahoana ihany koa no tsy misy sahy milaza ny raharahan’ny GMP? Nahoana no tsy misy sahy miteny ny raharahan’ny MDRM, araka ny tantara tena izy? I Chirac tamin’izy nandalo teto niteny hoe raha tianareo dia homeko anareo ny dosie raha zakanareo, fa tsy nisy sahy namaly ny teo amin’ny fitondrana hoe zakanay. Ka raha tsy mahazaka an’izay, fa vao mainka hiparitaka hiady an-trano, dia aleo tsy milaza an’io. Fa omeo aminisitia daholo ireo, ohatran’ny an-dRatsiraka, ary tsy tokony hatao mizana tsindrian’ila ny fanomezana izany. Dia ataovy hoe manomboka eto dia tsy misy intsony ny aministia, manomboka pejy vaovao. Ny aminisitia izany manko resaka lalàna ary eken’ny lalàna iraisam-pirenena.
- Sarotra ny raharaha raha izany kanefa miezaka hatrany manao ny fampihavanana ny Fiangonana amin’ny fanentanana amin’ny fiovam-po. Hita taratra ve izany amin’ireo heverina fa mila hampihavanina?
Dia tena niova fo marina ve? Fiovam-po ohatry ny ahoana no tadiavina? Fampihavanana inona no tiana hatao eto? Raiso ohatra ny tenin-dRatsiraka nilaza fa tsy nanenina tamin’izay nataony, ny tenin-dRavalomanana fony izy tonga dia karazana fihantsiana ady, misikotra ny olona hoe ndao. Fiovam-po ve izany? Fibebahana ve izany? Torak’izany koa ny an’i Hery Rajaonarimampianina niteny hoe hitarika an’ilay izy -niaraka tamin’i Andry Rajoelina izy tao anatin’io- misy fibebahana koa ve aminy? Satria ny takiana aminy dia ny hanao izay hisian’ny fifandraisana amin’ireo dimy ireo. Vonona hitarika ny FFKM, izaho mihevitra fa handeha amin’ny tsara izy io. Kanefa dia karazana “douche froide” ilay fanambarana nataony. Raha izay no fiovam-po, fiovam-po inona no tadiavinao aminy sa famporisihana koa amin’ny lafiny anankiray hoe alao samy handeha ho azy? I Andry tsy miteny mihitsy fa mahay mampiasa ireo manodidina azy amin’ny alalan’ny Mapar, toy ny tamin’ny fivoriana momba ny “loi de finances” farany teo. Hatraiza ny fampiasan’ny depiote ny konsiansy mitsinjo ny tombontsoam-bahoaka fa tsy ny an’ny olon-tokana na ny tombontsoa manokana?
- Raha ny rohin’ny zava-nisy teto amin’ny firenena dia tafiditra ihany koa ny tafika amin’ity fampihavanana ity. Ny fahitan’ny eveka an’izay?
Tafiditra ny tafika izay olona nirahina tamina hetsika nitarika famoizana ain’olona nitranga teto amin’ny firenena. Hatrany amin’ny raharahan’ny fanafihana kung-fu izay mety nisy “dérive” nataon’izy ireo sy tamin’ireo kirizy nifandimby: 1972, 1991, 2002, 2009. Ao anatin’izany ny raharaha Charles. Efa nilaza ny hisian’ny fampihavanana eo amin’izy samy izy ny jeneraly Rabotoarison satria na izy samy izy aza, misy momba ny andaniny, misy momba ny ankilany. Ahoana ihany koa ny ain’ireo olon-tsotra namoy aina tamin’ny iraka nampanaovina azy ireny?
- Mety hanao ahoana izany ny tohin’ny fampihavanana ataon’ny FFKM, indrindra taorian’ny fivoriana faha 35 natao tany Mahajanga?
Ny fivorian’ny FFKM faha 35 dia efa voafaritra taloha fa tamin’ny resaka an-jorony no nisy fikasihana kely ny fampihavanana. Misy fandrika politika betsaka ny lalana izoran’ny FFKM.
Nitafa : R. Herménégilde
Hitanao ao amin’ny gazety Lakroa laharana3897, pejy faha-13, nivoaka tamin’ny alahady 7 desambra ny tohiny.
Indro ny tohiny
Ny fivorian’ny FFKM faha 35 dia efa voafaritra taloha fa tamin’ny resaka an-jorony no nisy fikasihana kely ny fampihavanana. Misy fandrika politika betsaka ny lalana izoran’ny FFKM. Fa ny fahaizany miala amin’izany no hahatafavoaka ny pilanina arahiny. Fa raha haka tahaka fotsiny an’i Desmond Tutu, tsy mitovy. “Vérité et réconciliation” no nataony. Mazava ny azy ny zava-nisy, dia ny resaka “apartheid”, fantatra hoe iza avy no naninona tamin’izany? Kirizy be dia be mifangaro ny antsika. Dia inona amin’ireo no ho vahana? Satria samy nampanahirana an’i Madagasikara daholo ny fisian’izy dimy mirahalahy. Izay no mahatonga ahy hiteny hoe hafa ny fampihavanana an’izy dimy mirahalahy, ary hafa ny an’ny Malagasy. Satria samy manana ny olona akaiky azy sy ny mpanara-dia azy izy ireo. Fa ny vahoaka amin’ny ankapobeny matoa mihetsika, dia ny iray amin’ireo no manetsika any ambadika any. Amin’ny maha vahoaka azy, tsy hitako hoe inona no ady an-trano eto. Fa ny atahorako ary anisan’ny tena anohanako ity fampihavanam-pirenena ity, sao dia hanao RDC (République démocratique du Congo) isika raha tsy mitandrina, izany hoe hisy karazana “chef de guerre” isaky ny faritra. Ary izany no ahiahiko manokana amin’ilay fampihavanana amin’ny jiolahy mivalo. Satria ny antony rahefa misy “chef de guerre” amin’ny toerana tsirairay dia atahorana. Sao dia ampidirina amin’izay isika, satria ny toerana misy fitrandrahana rehetra, dia tsy maintsy misy ady ka sao dia vokatr’io zavatra io, dia aleo samy hisy “chef de guerre” isaky ny toerana. Ka rehefa handamin-javatra dia tsy maintsy hatao izay hahafa-po ny rehetra amin’izay ahafahan’ny olona “mitroka” ny harem-pirenena, araka ny tenin’i Mompera Ralibera. Tsy hoe maka fotsiny fa mitroka, ary misy hanan-karena betsaka amin’izay. Tadiavina hatao fitaovana amin’izany ny fivavahana.
- Mitaky fepetra mazava izany ny hahombiazan’ny fampihavanana irosoan’ny Fiangonana?
Manaiky aho amin’ny fomba ataon’ny FFKM miainga amin’ny 4F, fa ny valin-teny voalohany hanombohana ny fampihavanana dia hoe fampihavanana inona no tiana hatao eto? Rahefa voavaly hoe izao no fampihavanana tadiavina, dia izay no hahafahana manatanteraka ny “vérité”, ny “justice”, ilazana hoe ity ny marina. Fa raha vao mainka hanokatra fery, dia aleo mijanona. Raha io no hampipoaka zavatra, mahatanty ve ny rehetra amin’izay marina apoitra? Gaga aho, ohatra, amin’ny fahasahian-dRatsiraka niteny hoe izaho anie no nitarika ny tamin’ny aferan’i Andry iny. Fantatra fa ny Frantsay no tao ambadik’ilay izy fa tsy sahy nanonona ny Frantsay izy. Hahatanty koa ve ireo firenena amin’ny iraisam-pirenena izay misy firenena ambadika manohana an’ireo mpanao politika ireo, satria fantatra fa samy manana ny mpanohana azy ireo. Hahatanty ve ireo firenena ireo hilazana ny marina.
- Ahoana ny azonao anazavana mikasika ny “dahalo niova fo” mahabe resaka eny anivon’ny fiarahamonina?
Io dia mifandray amin’ny fepetra hahazoantsika vola hoe “tsy hahazo vola ianareo raha tsy milamina”. Resaka “projet” hahazoana vola avy amin’ny firenena mikambana io. Fa hatraiza ny dingana famerenana ireo olona ireo any amin’ny fiarahamonina raha tena niova fo izy? Satria samy hafa ny fiovana asa sy ny hazakazaka amin’ny asan-dahalo raha raisina hoe asa ilay asan-dahalo. Ahoana koa ny amin’ireo olona maty tamin’ny fanafihan’izy ireo, tanatin’ny fianakaviana? Inona no fanonerana atao an’ireo?
- Ao anatin’ny fiaviana isika izao amin’ny tetiandron’ny Fiangonana, manao ahoana ny fanantenana eo anatrehan’ity tontolo manahirana amin’ny fikatsahana fampihavanana ity?
Tsotra ny ahy, amin’ny maha “Justice et Paix”, ny fampihavanana dia asan’ny Fiangonana, izay no maha Fiangonana ny Fiangonana: mihavana amin’Andriamanitra sy mihavana amin’ny olona samy olona. Ny fanantenana dia ny fitondrana am-bavaka izany asa izany, hahazaka sy hahomby amin’ny fampihavanana atao. Manantena amin’ny lafiny anankiray fa samy mikajy ary samy manao izay zavatra mety mahasoa. Amin’ny lafiny anankiray koa mety misy mampiahotra satria, amin’ilay “guerre de communication” ankehitriny, noho ny tsy fahampian’ilay serasera dia mety izay no tsy hahatanterahan’ny Fiangonana an’io. Satria ny Fiangonana tsy manao politika ka tsy afaka hamaly isan’andro an’ilay zavatra tsy nataony. Ka hahatonga ny vahoaka hieritreritra zavatra hafa isaky ny mandeha. Rahefa ailiky ny fanjakana izy, tsy afaka manao mihoatra an’izay. Mety amin’ny fomba hafa indray no hanohizany ny fampihavanana izay efa asany rahateo.
- Voamariky ny olona rahefa jerena ireo olona heverina fa hampihavanina, dia olona misora-tena na fantatra fa kristianina daholo kanefa toa tsy mahazo ilay fampihavanana tian’ny FFKM hirosoana. Tsy hafahafa ve izany?
Samy mitonon-tena ho kristianina daholo tokoa ireo mpitondra fa samy manana ny fiheverany ny atao hoe kristianina. Marina fa mpianatry ny St Michel Ratsiraka, fa sady nobeazina teto Antananarivo izy no nobeazina tany Toamasina. Philibert Tsiranana: katolika no lasa silamo, inona izany no nandraisany ilay fivavahana kristianina? Raha “libération” no nandraisany azy, dia tsy gaga aho satria ny misionera tsirairay dia samy nanana ny fomba nitoriany tany amin’izay toerana nanaovany iraka. Ny an’ny FJKM manana ny fomba fijeriny koa ireo, na izy samy izy aza tsy mitovy fomba fijery. Tsy dia misy rafitra an-tanan-tohatra mafy tahaka ny an’ny katolika. Ny FLM, amin’izao, efa manomboka misy rafitra mafonjafonja. Ny kristianina miaraka amin-dry Andry tamina taranaka tanora te handray andraikitra fa tsy ampy fanofanana, tsy voaofana. Misy halemenay Fiangonana ihany izany, ao anatiny aho, satria ny ray aman-dreny teo aloha misy fiofanana betsaka nomena azy ireo, izay nandraisany andraikitra. Manaiky aho amin’izao firosoana amin’ny fiaviana izao, mibebaka aho fa tsy nahavita ny adidiko amin’ny andraikitra tokony ho nataoko. Izay no ibebahako, ka hanomezana fiofanana araka ny hevitry ny Fiangonana ny kristianina eo amin’ny fandraisana andraikitra izay ivelomana amin’ny finoana. Izay no voalazan’ny fampianarana sosialin’ny Fiangonana, araka ilay namoahana azy vao haingana teo. Ny fampiharana sy fiainana azy iny izany no tsy maintsy jerena akaiky. Voarakitra ao ny fandraisan’ny lahika andraikitra, ao anatin’izany ny tanora. Ahoana no hampielezana azy satria ny sehatra rehetra no voafaritra ao anatiny? Ka ny fibebahana ho anay ato anatin’ny Fiangonana katolika dia ny hanaparitaka an’iny ka hiainana azy eo amin’ny tontolon’ny fiarahamonina. Inona no andraikiny? Inona no tokony ho fantany? Inona no tandremany? Ary ny fijerena ny zava-misy amin’ny masom-pinoana kristianina fa tsy ilay politika politisianina.
Mankasitraka anao nanjifa ny gazety Lakroa.